कारागारबाटै पेस्तोलसहित १४ राउण्ड गोली भरिएको म्यागजिन गायब ! « Np Online TV
कारागारबाटै पेस्तोलसहित १४ राउण्ड गोली भरिएको म्यागजिन गायब !
झापा । झापा कारागार भद्रपुरमा सुरक्षार्थमा खटिएका एक प्रहरीले इटलियन पेस्तोलसहित १४ राउण्ड गोली भरिएको म्यागजिन हराएको घटना खुलासा भएको छ।
कारागारको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीकै लापरवाहीले एक कैदीबन्दी फरार भएका थिए। गौरादह नगरपालिका–८ स्थित जुरोपानीका २४ वर्षीय उमेश माझी फरार भएको नौ महिना बितिसकेको छ। २०७१ असार ७ देखि जबरजस्तीकरणी र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय भुक्तान गरिरहेका माझी २०७५ साउन दिउँसै कारागारको पर्खाल नाघेर भागेका थिए। माझी पेशाले इलेक्ट्रिशियन थिए।
कारागारभित्रै बिजुली बनाउने काम गर्नका लागि उनले सिढीको प्रयोग गरेका थिए। सिढी चढेर काम गर्दैगर्दा उनी पर्खाल नाघेर फरार भएको बताइएको छ। कारागारबाट कैदी फरार भएपछि प्रहरी सहायक निरीक्षकसहित ६ प्रहरीलाई प्रहरी कार्यालय झापाले निलम्बन गरेको छ।